Waa maxay sababta la dagaalanka go'doonka bulsheed ay tahay sabab mudan - Cunnooyinka ku socda wheels
Go'doominta bulshada way adkaan kartaa in si ku filan loo qeexo loona cabbiro, laakiin guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay xaalad leh xiriir yar oo bulsheed, xiriiro tayo yar ama aan lahayn, iyo la'aanta dareenka lahaanshaha. Waxay kaga duwan tahay kalinimada inay diiradda saareyso la'aanta la taaban karo ee xiriirka bulshada halkii ay ka ahaan laheyd dareenka shakhsiga ah ee kali ahaanshaha. In kasta oo labaduba ay isku dhow yihiin badanaana ay wada bartaan, go'doominta bulshada guud ahaan waxay la xiriirtaa tiro badan oo arrimo caafimaad oo xun ah.
Waayeel badan ayaa wajaha go'doomin bulsheed
A dib u eegis dhowaan lagu sameeyay cilmi baarista waxaa qoray Nicholas Nicholson oo lagu daabacay Joornaalka Kahortagga Aasaasiga ah wuxuu ogaaday in inta udhaxeysa 10 iyo 43 boqolkiiba dadka waayeelka ah ee ku nool bulshada ay gooni u yihiin bulshada. Wuxuu sidoo kale sheegay arrimo dhowr ah oo qatar ah oo laxiriira go'doominta bulshada ee dadka waaweyn, oo ay kamid yihiin:
Geerida saaxiibbada dhow, xubnaha qoyska ama xaaskaaga
Xaafadaha aan amaanka ahayn
Dhibaatooyinka xagga gaadiidka
In kasta oo arrimahan oo dhami ay muhiim yihiin, ku noolaanshaha keliyuhu waa arrin si gaar ah khatar ugu ah go'doominta bulshada ee odayaasha. Waxaa xusid mudan, 29 boqolkiiba reer Minnesota ee da'doodu tahay 65 iyo wixii ka weyn inay kaligood noolaayeen sanadkii 2010 sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Mareykanka, oo soo jeedinaya in in kabadan rubuc dadka waayeelka ah ay halis sare ugu jiraan go'doomin bulsho.
Nasiib darrose, arrinta ku saabsan go'doominta bulshada ee dadka waayeelka ah waxay u badan tahay inay koraan sannadaha soo socda. Sida inbadan oo idinka mid ah aad ka warqabtaan, tirada dadka waaweyn ee waayeelka ah ee ku nool Mareykanka ayaa la saadaalinayaa inay si isdaba joog ah u kordhi doonaan tobanka sano ee soo socda. Isla mar ahaantaana, saamiga daryeel-bixiyeyaasha suurtagalka ah ama shakhsiyaadka waayeelka ah ayaa la filayaa inay hoos u dhacaan. Warbixin ka socota Machadka Siyaasadda Dadweynaha ee AARP waxay muujineysaa in saamigan, oo ahaa 7 daryeele ee 1 qof kasta oo da'diisu ahayd 80+ sanadki 2010, uu hoos udhigi doono 3: 1 sanadka 2050. Hoos udhaca saamiga daryeel bixiyaha wuxuu soo jeedinayaa hoos udhaca taageerada - oo ay kujirto taakulaynta bulshada - ee dadka waaweyn.
Go'doominta bulshada ayaa si xun u saameysa caafimaadka
Dib u eegista Nicholson, marka lagu daro a daraasad dhowaan ay sameysay Talaabooyinka Akadeemiyada Qaranka ee Cilmiga iyo daraasad ay sameysay Dugsiga Kalkaalisada ee Jaamacadda Yale waxay soo jeedinayaan in go'doominta bulshada iyo kalinimadu ay xiriir la leeyihiin halista sii kordheysa ee dhibaatooyin badan oo la xiriira caafimaadka, oo ay ka mid yihiin:
Garashada garashada iyo waallida
Dhimasho ismiidaamin ah
Cudurka sanbabada ee joogtada ah
Qabsashada hargabka caadiga ah
Kordhinta cadaadiska dhiigga ee dhiig-baxa
Dib-u-dhigis cisbitaal iyo xarumo-caafimaad
Dhimashada cudurka wadnaha iyo istaroogga
Intaa waxaa sii dheer, cilmi baaris ayaa soo jeedinaysa in shabakadaha bulshada ay dhiiri gelin karaan dabeecadaha caafimaadka qaba ee dadka waayeelka ah, sida u hoggaansamida daaweynta caafimaadka iyo ka-hortagga dabeecadaha halista ah. Taa bedelkeeda, waayeelka bulshada ku go'doonsan waxay halis weyn ugu jiraan dabeecadaha caafimaad ee xun sida sigaar cabista, cabbitaanka badan, iyo jimicsi la'aanta jireed, sida uu qabo Nicholson.
In ka badan cunto
Nasiib wanaag, tiro ka mid ah ururrada ku saleysan bulshada - sida Cuntada Lugaha - kaalin muuqata ka ciyaaraan wax ka qabashada go'doominta bulshada.
Marka lagu daro bixinta cuntada kulul, caafimaadka leh ee macaamiisha, tabaruceyaashayada saaxiibtinimadu waxay bixiyaan ilo maalinle ah oo xiriir bulsho ah. Macaamiisha qaar, kani waa qofka kaliya ee ay la falgalayaan maalin la siiyay, isku xirnaantuna waxay ka caawineysaa inay si caafimaad leh oo madaxbannaan ugu noolaadaan.
Ilaa dhowaan, waxaan haysanay oo keliya caddayn sheeko-wadaag ah oo ku saabsan faa'iidooyinka tabaruceyaasha Cunnada ee Wheels ay siiyaan macaamiisha iyagoo dhex maraya is-dhexgalkooda. Si kastaba ha noqotee, daraasad dhowaan ay sameysay Cunto ku saabsan Wheels America ayaa cabiray faa iidooyinka isdhexgalka bulshada ee ay bixiso Meals on Wheels waxayna cadeysay in qeybinta tabaruca ee Meals on Wheels ay bixiso "in kabadan cuntada."
Iyada oo gacan laga helayo barnaamijyada ku saleysan bulshada sida Meals on Wheels, Walaalaha Yaryar - Saaxiibada Waayeelka, SilverSneakers iyo kuwa kale, dadka waayeelka ah waxay heli karaan taageerada bulshada ee ay u baahan yihiin si ay caafimaad ugu noolaadaan isla markaana ugu noolaadaan guriga.